ဆာဗာဒေါင်းသွားခဲ့တဲ့ PUBG Mobile ဂိမ်း – DigitalTimes.com.mm
မနေ့ညကပဲ PUBG MOBILE ရဲ့ server တွေဒေါင်းသွားခဲ့ပြီး ခုချိန်ထိလည်း Maintenance အဆင့်မှာပဲရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီသတင်းနဲ့အတူ Tencent က ကြော်ငြာလိုက်တဲ့သတင်းကတော့ iOS နဲ့ Android တွေအတွက် နောက်ထပ် Update ထွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ။
မနေ့ညက PUBG Mobile ကစားဖို့ Log In ဝင်တဲ့သူတွေက ဆာဗာဒေါင်းတာကို သတိပြုခဲ့မိပြီး Tencent ကတော့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသူတွေအနေနဲ့ ၆နာရီအတွင်း အွန်လိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ UK မှာတော့ မနက်၈နာရီ၊ US မှာတော့ မနက် ၂နာရီနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ နေ့လည် ၂နာရီခွဲလောက်မှာ ပြန်ပြီး အွန်လိုင်းဖြစ်တော့မှာပါ။
ဆာဗာတွေအွန်လိုင်းပြန်ဖြစ်သွားရင်တော့ PUBG Mobile Update အသစ်ကိုဒေါင်းပြီးဆော့လို့ရပါပြီ။ ဒီ update မှာပါဝင်လာမှာတွေကတော့
– First-Person Perspective အသစ်
– Royale Pass Season 1
– Resource နဲ့ AirDrop တွေ ပိုများလာတဲ့ map အသေး Mini-Zone
– ဘာလက်နက်တွေရှိတယ်ဆိုတာ ကြည့်လို့ရတဲ့ Armory အသစ်တွေ
– ကိုယ်ပိုင် UI ဒီဇိုင်းနဲ့ ပစ္စတိုတွေ
– တာယာတွေကိုတောင်ဖျက်ဆီးလာနိုင်တဲ့ Melee လက်နက်တွေ
– အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ချင်းစီကို Mute လုပ်နိုင်တဲ့ Feature
– ပွဲပြီးရလဒ်ကိုပြပေးမယ့် Result Screen
– အာရှဇာတ်ကောင်မော်ဒယ်လ်တွေ အပြင် ဆိုရှယ်နက်ဝါ့ခ် ၂ခုကိုချိတ်ဆက်နိုင်တာတွေ၊ Room Card တွေထည့်ပေးထားတာတွေ၊ Shop မှာအသစ်ရောက်လာတဲ့ Item အသစ်တွေနဲ့ Item တွေကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလို့ရနိုင်တာတွေ ဒါတွေအားလုံးက Update ဗားရှင်းမှာပါလာမယ့် Feature အသစ်တွေပါပဲ။
ကျွန်တော်ကတော့ Update အသစ်မှာ Royale Pass က စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာ Feature အသစ်တွေပါလာမလဲဆိုတာကတော့ တရားဝင်ထွက်လာတဲ့အချိန် ဆော့လို့ရတဲ့အချိန်ကျရင် သိရတော့မှာပါ။ ဒါဆို၂နာရီခွဲထိ စောင့်လိုက်ကြဦးစို့…. 😉
Ref: Express, PUBG Mobile Twitter
မနညေ့ကပဲ PUBG MOBILE ရဲ့ server တှဒေေါငျးသှားခဲ့ပွီး ခုခြိနျထိလညျး Maintenance အဆငျ့မှာပဲရှိနပေါသေးတယျ။ ဒီသတငျးနဲ့အတူ Tencent က ကွျောငွာလိုကျတဲ့သတငျးကတော့ iOS နဲ့ Android တှအေတှကျ နောကျထပျ Update ထှကျမယျဆိုတဲ့သတငျးပါ။
မနညေ့က PUBG Mobile ကစားဖို့ Log In ဝငျတဲ့သူတှကေ ဆာဗာဒေါငျးတာကို သတိပွုခဲ့မိပွီး Tencent ကတော့ ပွုပွငျထိနျးသိမျးသူတှအေနနေဲ့ ၆နာရီအတှငျး အှနျလိုငျးပွနျဖွဈဖို့ လုပျဆောငျနတေယျလို့ဆိုထားပါတယျ။ UK မှာတော့ မနကျ၈နာရီ၊ US မှာတော့ မနကျ ၂နာရီနဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ နလေ့ညျ ၂နာရီခှဲလောကျမှာ ပွနျပွီး အှနျလိုငျးဖွဈတော့မှာပါ။
ဆာဗာတှအှေနျလိုငျးပွနျဖွဈသှားရငျတော့ PUBG Mobile Update အသဈကိုဒေါငျးပွီးဆော့လို့ရပါပွီ။ ဒီ update မှာပါဝငျလာမှာတှကေတော့
– First-Person Perspective အသဈ
– Resource နဲ့ AirDrop တှေ ပိုမြားလာတဲ့ map အသေး Mini-Zone
– ဘာလကျနကျတှရှေိတယျဆိုတာ ကွညျ့လို့ရတဲ့ Armory အသဈတှေ
– ကိုယျပိုငျ UI ဒီဇိုငျးနဲ့ ပစ်စတိုတှေ
– တာယာတှကေိုတောငျဖကျြဆီးလာနိုငျတဲ့ Melee လကျနကျတှေ
– အဖှဲ့ဝငျတဈယောကျခငျြးစီကို Mute လုပျနိုငျတဲ့ Feature
– ပှဲပွီးရလဒျကိုပွပေးမယျ့ Result Screen
– အာရှဇာတျကောငျမျောဒယျလျတှေ အပွငျ ဆိုရှယျနကျဝါ့ချ ၂ခုကိုခြိတျဆကျနိုငျတာတှေ၊ Room Card တှထေညျ့ပေးထားတာတှေ၊ Shop မှာအသဈရောကျလာတဲ့ Item အသဈတှနေဲ့ Item တှကေိုလကျဆောငျအဖွဈပေးလို့ရနိုငျတာတှေ ဒါတှအေားလုံးက Update ဗားရှငျးမှာပါလာမယျ့ Feature အသဈတှပေါပဲ။
ကြှနျတျောကတော့ Update အသဈမှာ Royale Pass က စိတျဝငျစားဖို့အကောငျးဆုံးဖွဈမယျထငျပါတယျ။ တကယျဘယျလိုစိတျဝငျစားစရာ Feature အသဈတှပေါလာမလဲဆိုတာကတော့ တရားဝငျထှကျလာတဲ့အခြိနျ ဆော့လို့ရတဲ့အခြိနျကရြငျ သိရတော့မှာပါ။ ဒါဆို၂နာရီခှဲထိ စောငျ့လိုကျကွဦးစို့…. 😉